Digital Patrika – सन्दर्भ योग दिवसः यस्तो छ विकासक्रम र महिमा
सन्दर्भ योग दिवसः यस्तो छ विकासक्रम र महिमा
Jun 21, 2018digitalpatrikaताजा समाचार, देश, समाज0
काठमाडौं । आज २१ जून, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले आजको दिनलाई योग दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि विविध कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आएको छ । योग भारत वर्षमा हजारौं वर्षदेखि जीवनशैलीको अभिन्न हिस्सा बनेर रहेको पाइन्छ । जुन अहिले विश्वभर फैलने क्रममा छ ।
योगका आदिगुरु भगवान् शिवलाई मानिन्छ । योगका छरिएर रहेका आयामहरूलाई संकलित गरी प्रस्तुत गर्ने महर्षि पतञ्जलिले ‘योगसूत्र’ भन्ने पुस्तकमा भनेका छन् ः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । अर्थात् चित्त वृत्तिको निरोध नै योग हो । यसबाट के बुझिन्छ भने योगको उद्देश्य चित्त वृत्तिहरूको निरोध हो । अर्थात् चित्त र वृत्तिलाई ठीक बाटोमा डोर्याउनु नै योग हो ।
यौगिक क्रियाको सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या गर्ने व्यक्ति पतञ्जली हुन् । उनको ग्रन्थ ‘योगसूत्र’ अहिले संसारका सबैजसो भाषामा अनुवाद भइसकेको छ । यस ग्रन्थकोे पहिलो व्याख्या व्यास र वाचस्पति मिश्रबाट भयो भने पछि धेरैले यसको व्याख्या गरे । जैन गुरु हेमचन्द्रले यसलाई जैन धर्मको ध्यानविधिमा प्रयोगमा ल्याए । अरु संस्कृतिको कुनै पनि कुरा स्वीकार नगर्ने यहुदी समुदायले समेत अहिले योगसूत्रको अनुवाद गरेर यसलाई व्यवहारमा ल्याइरहेका छन् ।
योगसूत्रलाई योग र ध्यानको आधार मानिन्छ । विश्वका प्रथम योगी शिवले गरेको ध्यानको मूर्ति सबभन्दा प्राचीन मूर्ति हो । महावीर जैनको पनि ध्यानका मूर्ति पाइन्छन् । भगवान् बुद्धको ध्यान मूर्ति विश्वप्रसिद्ध नै छ । यद्यपि, योगशास्त्र भने भगवान् कृष्णको योगदान हो र उनलाई योगेश्वर भनिन्छ । उनको उपदेश गीतालाई योगशास्त्र भनिन्छ । योगसूत्रमा बताइएका अधिकांश कुरा गीतामा पनि छन् । यस प्रकार अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस गीताका उपदेशको सामान्य स्वीकृति पनि हो ।
पतञ्जलीले योगसूत्रमा १ सय ९५ सूत्र दिएका छन् । जसलाई उनले चार खण्डमा विभाजित गरेका छन्– १. समाधि पाद (५१ सूत्र) २. साधन पाद (५५ सूत्र)३. विभूति पाद (५५सूत्र) ४. कैवल्यपाद (३४ सूत्र) । पतञ्जलि योगसूत्रमा योगका आठ चरणलाई अष्टांग योगका रूपमा बताइएको छ । जसअन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्दछन् । यिनलाई एकपछि अर्को गरेर साध्दै जाँदा जीवात्मा परमात्मासम्म पुग्छ भन्ने विश्वास पतञ्जलिको छ ।
–समाधि गरेर हुने नभई माथिका सबै चरण पार गरेपछि घटित हुने कुरा हो । यो योगको लक्ष्य नै हो भने पनि हुन्छ । समाधि अवस्थामा आनन्दमय, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय एवं शान्तिमय जुन स्वरूपमा पुगिन्छ त्यसपछि पूर्ण तृप्ति वा परमआनन्द प्राप्ति हुन्छ । यो अवस्थामा पुगिसकेपछि मानव जीवनमा केही पनि गर्न बाँकी रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पुगेको योगी त्रिगुणातीत अर्थात् सत्व, रज र तम गुणबाट पर पुग्छ । उसका लागि केही पनि प्राप्त गर्न बाँकी रहंदैन ।
यस अवस्थामा पुगेका योगीहरू
पातञ्जल योगसूत्रकै आधारमा वर्तमान समयका अनेक सन्त महापुरुष र आध्यात्मिक गुरुहरूले समयसापेक्ष हुने गरी ध्यानका विभिन्न विधिहरूको विकास गरेका छन् । स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, रमण महर्षि, महर्षि महेश योगी, सत्य साई, ओशो रजनीश, पाइलटबाबा, र श्रीश्री रविशंकर, ब्रह्म बाबा आदिले ध्यानका विधिमाथि प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूबाट विपश्यना ध्यान, कुण्डिलीनी ध्यान, राजयोग ध्यान, भावातीत ध्यान, सक्रिय ध्यान, ज्योतिध्र्यान, सहजध्यान, सुदर्शन क्रिया आदि अनेकौं तरिका विकास भएका छन् ।
योग र आसनलाई सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यमा स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णको ठूलो योगदान छ । यसलाई योग दिवसको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुरूमा मान्यता प्रदान गर्ने पहल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका हुन् ।
योगासनलाई जीवनमा उतार्ने र सोहीअनुसार हठयोग सम्प्रदाय सुरु गर्ने सन्त शंकरावतार गुरु गोरखनाथ हुन् । उनको सम्प्रदायलाई योग सम्प्रदाय भनिन्छ । भगवान् शिवदेखि गुरु गोरखनाथसम्मको योगदानलाई ध्यानमा राखेर नेपालका योगप्रेमी पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पुस १६ गते मनाउने परम्परा सुरु गरे तर संयुक्त राष्ट्र संघबाट अनुमोदन गराउन सरकारको प्रयास भएन । आजको दिनलाई योग दिवसको रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने प्रयास भारतले गरेको हो ।
२१ जूनलाई नै किन छानियो त ?
आजको दिन वर्षभरिकै सबैभन्दा लामो दिन हो । यो दिन प्रकृति, सूर्य एवं सूर्यको तेज सबैभन्दा बढी प्रभावशाली रहन्छ । त्यसैकारण सन् २०११ म पहिलो पटक विश्वभरिका अग्रणी योग गुरुहरू भारतको बेंगलोरमा भेला भई यसै दिन योग दिवस मनाउने कुरामा सहमति भएको थियो । यो प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ७५ देशको समर्थन प्राप्त भएपछि यसले मान्यता पाएको हो ।